Kedu ụzọ dị mma iji malite ịgba ịnyịnya? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Njegharị igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Njegharị igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Kedu ụzọ dị mma iji malite ịgba ịnyịnya?
Ọtụtụndị mbidona-agbagidesi ike na 5 ruo 10 kilomita ruo ọtụtụ ọnwa tupu ha ewulie ume ike ogologoebe dị anyakwuo 20-30 kilomita na ọbụlagodi ka ogeonye na-agba ígwèna njegharị naigwe kwụ otu ebenjem. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ike ikpuchi ogologoebe dị anyana ngwa ngwa oge ị ga-ewu ume nabidoitukwasi obi giigwe kwụ otu ebe.Iri 10, 2020
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibido igwe kwụ otu ebe ma nwee ọrụ nka ole na ole ị ga-achọ ikpuchi. - Taa, anyị ga - arapara n’ihe ndị bụ isi, yabụ ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi ị bidoro ịgba ịnyịnya ígwè, nke a bụ akụkọ maka gị. (Egwu di egwu) Ka anyi bido na mbido.
Ka anyị gaa na nke mbụ ya, ka anyị si na ya Gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe na-ahazi ka ogo gị ma ihe niile adịzie. Mgbe ahụ ị ga - achọ idebe igwe kwụ otu ebe na 30 centimeters site na ụzọ. Gbanwee cranks gị ezi uche.
Anyị na-akwado ọnọdụ elekere atọ maka Iwu kachasị amasị gị. Dị ka nke ahụ. Mgbe ahụ jide njide na ihe ndina ahụ, dabere igwe kwụ otu ebe na gị, wepụ aka gị na sadulu ahụ ma jiri ụkwụ gị gaa ihu.
Ugbu a jidere breeki abụọ, mee ka ịdị arọ gị karịa igwe kwụ otu ebe, tinye ụkwụ gị kacha mma na pedal na-aga n'ihu, gbanwee azụ gị na sadulu, lelee ubu gị iji lelee okporo ụzọ ahụ, ma ị ga-aga. Ya mere, pịa ala n'ihu ihu gị ka ị nwee ike inwe ntụsara ahụ gafee igwe kwụ otu ebe. (egwu obi ụtọ) - Ugbu a anyị apụla ma ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ oge dị mma iji chee echiche otu esi akwụsị.
Ugbu a nke a bụ ezigbo ọrụ dị mkpa ịkpọ oku, ọkachasị otu esi akwụsị njikwa. Enwere ike ịgbatị oge a na nhazi oge. A na-ebufe ikike nkwụsịtụ site na wiilị dị n'ihu.
Nwere ike nwalee nke a site n'ije ije na-esote igwe kwụ otu ebe gị ma tinye brakes zuru ezu. Lee ihe na - eme n’azụ egwu) Ugbu a, megharịa nke a site na itinye breeki n’ihu n’ụzọ zuru ezu. Kedu ihe na-eme? The azụ nke igwe kwụ otu ebe ga-amalite na-ebuli si n'ala, nke pụtara na ị ga-enwe ike itinye ihe ọ bụla braking ike na azụ wheel.
Na na na, na na na oke. Ma otu ụkpụrụ ahụ metụtara. Ọ bụrụ n’ịchọrọ nwayọ, imata brek n’ihu gị dị ezigbo mkpa.
Ugbu a omume na-eme ka zuru oke. Mana ikwenye na oge na anya ọ ga - ewe iji kwụsị bụ ihe dị oke mkpa maka ikpori ndụ, ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. (Pịa igwe kwụ otu ebe) Nọgide na-eme ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị ka i nwere ike ka ị wee mara ole ọrụ ọ bụla na-enye gị - nke ahụ na-edugakwa anyị na ihe ịchọrọ iji usoro braking gị na mkpa ịnwe igwe kwụ otu ebe, mana ọ dị mkpa ka ị nweta ya.
Malite site na idobe ibu gị na taya ahụ n'ihi na nke a ga-enye gị njide kachasị mma n'okporo ụzọ. Iji mee nke a, ịchọrọ itinye ụkwụ n'èzí gị ma tinyekwa ibu ahụ site na ogwe aka gị n'èzí. Nke ahụ ga - enyere gị aka ịtụgharị.
Kwesịrị, ị ga-eme nke a pụọ ​​na okporo ụzọ, dị ka nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala, mgbe ahụ ị ga - eme asatọ dịka m ga - egosi gị. (Upbeat music) Ma mgbe ahụ ihe ịchọrọ ime mgbe ị na - agba ọsọ site na usoro ahụ, ịchọrọ iguzo maka oke osooso. (egwu na-ada ụda) - Iji mee nke a, ụkwụ gị na-eduga na ala bụ ọnọdụ elekere abụọ na atọ, jiri nwayọ na-aga n'ihu na oche ahụ, jidesie aka ike ahụ ike mana ọ dị jụụ mgbe ị bilitere. Igwe kwụ otu ebe na-aga n'okpuru gị 'gbalịa ịlụso ya ọgụ.
A na-eji usoro a eme ihe mgbe ị na-eme ka ọrịrị dị mkpirikpi ma ọ bụ na-ejide ike na nrịgo dị elu. Anyị nwere ike itinye mgbatị na-adịghị mma na pedals na pedals karịa mgbe anyị nọ ọdụ. Nke a bụkarịrị n'ihi ike ndọda.
Iguzo ọtọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji belata mmetụta nke okporo ụzọ na-adịghị mma ma mee ka ịnyịnya gị nwee ntụsara ahụ. N'oge ụfọdụ, ọ nwedịrị ike inye gị ikike ịchịkwa. (egwu obi ụtọ) Dịka ọ bụla na nka izizi, anyị na-akwado ka ị chọta ebe dị jụụ na mpụga okporo ụzọ. - Ndị a bụ ezigbo ezigbo nkà iji bido ịmalite ma ha dịkwa mma ijikwa. - Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a ma chọpụta na ọ bara uru, nye anyị nnukwu mkpịsị aka ukwu na maka isiokwu ndị ọzọ gbasara nka pịa ebe a n’okpuru.
Kedu ka m ga esi eme njem njem igwe kwụ otu ebe?
47 Atụmatụ njem ijiMee atụmatụNke mbu giNjem igwe kwụ otu ebe
JIRI YA NWAYỌỌ.
EBU EGO EGO EGO NA GAR.
Mụta dịkarịa ala ihe bụ isi nke ASGUS OF obodo aatụmatụkaokirikirina
Atụla egwu ịjụ.
Atụla egwu ịda mba.
N’oge ụfọdụ, ị chọrọ ndu.
Debe GPS ma gwa ndị mmadụ okwu.
Anyị niile anaghị ebi na paradaịs ịnyịnya ígwè, mana anyị nwere obere etu anyị ga-esi nwe opekata mpe otu ụzọ gafere ịnọ n'okporo ụzọ dị jụụ ma dịkwa ụtọ. Yabụ n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ịhazi ụzọ, otu esi eji teknụzụ anyị nwere ugbu a ịchọta ụzọ ọhụrụ dị mma ịkwọ ụgbọala wee soro ha, yabụ ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ n'egwuregwu ahụ ma na-eche etu ị ga-esi mesoo okporo ụzọ ndị na-ekwo ekwo nwere ike gbanahụ. Na-achọ okporo ụzọ ọhụụ ka ọ wee mee ka ụzọ ndị a ma ama mara.
Olileanya isiokwu a na-enyere aka! Yabụ kedu ụzọ dị mma iji gafere? Ihe ntakịrị dabere na ihe masịrị gị: Enwere m mmasị na ịrịgo na ịrịgo ugwu, ma ọ bụrụhaala na ha adịchaghị elu, ana m ekele gị nke ukwuu. Ndị ọzọ na-enwe mmasị iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ na-anya ọsọ ọsọ ọsọ ka ha nwere ike. Ya mere, anyị hapụrụ gị ụdị ụzọ a ị ga-eme atụmatụ.
Agbanyeghị, ihe zuru ụwa ọnụ n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè niile bụ ịhụnanya nke ụzọ dị jụụ, nke dị jụụ ma dịkwa jụụ, mana ọ kwesịrị ịbụ: agbakwala ebe ị na-anya m na-ekwukwa ọzọ ịmetụta: emela ụgbọala ebe ị na-anya ma ọ bụ ebe ị na-anyaghị ebe ị na-anya! Enwere m ọtụtụ ebe m bi na UK. Echere m na ndị mmadụ maara ụzọ dị mkpa nke ime obodo na nke ime obodo ma ha mara ha n'ihi na ha na-anya ha. Site na akpu nke ụgbọ ala gị, ha nwere ike ịmasị mara mma: ịma mma mara mma, okporo ámá ndị mara mma, okporo ụzọ na-aga ngwa ngwa na ihe na-agaghị amasị ya! Ọfọn, okporo ụzọ na-agagharị ngwa ngwa iji malite: okporo ụzọ ndị a adịghị mma maka ịgba ịnyịnya ígwè mana mgbe mgbe ha juputara na ndị na-agba ịnyịnya ígwè adszọ na-agba ịnyịnya Nke a bụ ebe teknụzụ na-abata ya mere enwere ụzọ ole na ole raara onwe ha nye ịchọta ngwa na weebụsaịtị anyị jiri ebe a na GCN onye a na-akpọ 'Komoot' na ha nwere a free free version na a adịchaghị nhọrọ oke.
Ọ dị oke mfe. Yabụ ugbu a, anọ m na weebụsaịtị gị. M pịa na peeji nke nhazi ụzọ.
Enyere m ebe m malitere, cafe mara mma nke m maara, m wee tinye ebe ọ bụ ụlọ ahịa tii kacha mma, zụta akwụkwọ na Komoot mere ihe ndị ọzọ m maara site na ahụmịhe na ndị a bụ n'okporo ámá m ga-ahọrọ, na Komoot hụrụ ha n'ihi na o nwere ụdị algorithms nwere ọgụgụ isi, data nke ọ nwere ike ịnweta n'aka ndị ọrụ ya, yana ihe ndị a na-akpọ isi ebe ahụ nke ndị mmadụ nwere mmụọ na-ahapụ ma duzie m ka m kwenye nnukwu ihe maka ndị na-agba ịnyịnya. Yabụ n'okwu a amamiihe ụzọ dị site na Portbury ruo Clevedon ugbu a, dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ mpụga, ugbu a enwere m ọnọdụ maka ụzọ na-eme mkpọtụ nke na-ada ụda nke ukwuu yana mgbe oge ụfọdụ ị ga-ahụ Komoot n'ụzọ nkịtị ọrụ arụmọrụ mepụtara. Ugbu a enwere ọtụtụ obere nhọrọ ndị ọzọ ebe a igwu egwu yana gụnyere ụdị ụzọ ọ bụla ịchọrọ.
N'ihi ya, m gbara ịnyịnya ígwè nke na-abụkarị okporo ụzọ dị jụụ n'ebe ahụ na-enyekwa m gravel ma ọ bụ ọsọ ọsọ ọsọ, ụzọ m si dị: na nke a 44,1 kilomita, ọ na-agwa m oke ịrịgo ebe na ebe ọ na-aga. ruo, na profaịlụ elu ahụ dị n'okpuru ebe a ma ọ na-enye m oge e mere atụmatụ na nke ahụ dabere n'otú m chere na m bụ, dịka ị pụrụ ịhụ, enwere m ụdị onwe m maka humwell, ezigbo mmesapụ aka nyocha nke m E kpebiri ahụike.
E nwere ụzọ atọ ị ga - esi soro ụzọ a: Nke mbụ bụ ụzọ ochie - ụlọ akwụkwọ, ebe ị ji nlezianya dee ntuziaka ntụgharị site na aka, anaghị m abanye na mpempe map nke ga - eme ka mmiri na ọsụsọ wee sie ike, gịnị kpatara ịchọghị ime ihe ahụ ọzọ. Kama, inwere ike iji ekwentị gi dika ihe igodo nsoro. Ya mere Komoot nwere ngwa ma oburu na m pịa njem m, igodo nke ntughari na amalite ma obu olu mgbe m choro itinye ekwentị m n'akpa ma obu ihu mgbe m nwere ugwu, nke na-enye m ohere ịpị ekwentị m na aka m Usoro atọ bụ iji kọmputa igwe kwụ otu ebe GPS dị ka nke a Ya mere, nke a bụ Wahoo, na n'ezie m nwere ike ịmekọrịta ya na akaụntụ Komoot m, nke pụtara na m nwere ike soro m ụzọ Komoot na aka nke bọtịnụ Ọ bụrụ na ịchọrọ ime obere nyocha banyere njem ị chọrọ tupu ị gawa, ma eleghị anya n'ihi na ị na-aga ebe ahụ, yabụ enwere ntakịrị ihe na ya, ị tinyekwuola ego, mgbe ahụ Ekwadoro m Google m na-eji nke a oge niile, ọtụtụ ya, maka eserese, mana n'ezie ọ bara oke uru naanị mgbe ị nwere naanị otu You nwere ike ị nweta echiche nke ụzọ dị ka, ọbụlagodi ihe dị n'okporo ụzọ bụ nakwa ọnọdụ okporo ụzọ n'ihi na ị nwere ike ijide n'aka na ụgbọ ala Google Street View na-akpata traf fic jam The aver old cyclist may may do so too, nke bụ a doro anya otu red ọkọlọtọ na ọ bụ o doro anya na ibu mfe iji.
Echeghị m na m kwesịrị ịkọwa. Mana agbanyeghị ego ị na-adọkpụrụ onye mmanụ oroma n'okporo ámá ịchọrọ ịlele n'okwu a na-enwu gbaa Portbury na Clevedon ma gbaghara onwe gị n'echiche nke ịntanetị m. Oh, ka anyị gaa: 'enweghị nghọta'.
Ọmarịcha Lane Portbury na Clevedon, nke ahụ dị mma. Na ngwụcha, ihe ọmụma obodo bụ ezigbo akụ na-eche ka a gwuo ya, ọ bụrụ na dijitalụ na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ na ndụ n'ezie - ndị mmadụ na-aga ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị, nke bụ mgbe niile bonanza, ma ọ bụ ọgbakọ ịgba ịnyịnya ígwè mpaghara, kwa, naanị ihe atụ random cyclists ị hụrụ na ahụmịhe m na-enwekarị obi ụtọ ịkọ nkata gbasara ụzọ gasị ka ị nwee ike mee nke kachasị ya ma kesaa ndụmọdụ gị yana enwere m obi ike na ị wuru otu Mee okporo ụzọ okporo ụzọ dị egwu wee wulite ịkwa akwa -machaa loops. Ọ bụ kpọmkwem ihe na-atọ gị ụtọ na ebe ị na-etinye oge ị na-etinye n'okporo ụzọ na-arụsi ọrụ ike ruo opekata mpe.
Echere m na isiokwu a bara uru. Biko nye ya nnukwu mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị ma nọrọ jụụ ma nwee ọkwọ ụgbọ ala. Ọ bụ a mara mma ọhụrụ ụzọ
Gba ígwè maka minit 30 kwa ụbọchị?
Cygba ígwèenwekwu ntachi obi gị na n ’igwe kwụ otu ebe
Mgbatị ahụ igwe kwụ otu ebe maka opekata mpeNkeji 30 kwa ụbọchịga - ewulite obi gị na akwara. Site na itinye mgbalị na-agbanwe agbanwe, ị ga-ahụ mmụba nke ikike ikuku gị, na-enyere gị aka ịgba igwe ogologo oge ma ọ bụ na ịnyagharị siri ike karị.
Ridnya ịnyịnya nwere ike ịnwe ụdị ụdị na nha niile, mana ọ bụrụ na enwere gị oge maka oge ị nwere ike iwulite njem kwesịrị ekwesị na nkeji 30. Anyị chere na anyị ga-anwale ya wee hụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta draịva kwesịrị ekwesị naanị ọkara awa, were nyocha na ngwa gcn nke ị na-achọ. Ebe ọ bụ na ọnọdụ abụghị otu maka onye ọ bụla, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ezigbo ndụ ihe atụ nke ihe anyị dịka gcm moderators na-eme mgbe anyị nwere naanị 30 nkeji iji mee itapenlets gocycling akpụkpọ ụkwụ 30 nkeji na-adịchaghị ogologo iji nweta otu nọkwasi n’ụzọ.
Echere m na ọ ga-ewe m 30 nkeji naanị iji pụọ na ọnụ ụzọ m na ngwongwo m na Mypike, nke ahụ ga-abụ ihe ezi uche na-enweghị isi nye m ezigbo nnọkọ na 30 nkeji na turbo na-agbanwe ma na-asa ahụ mgbe obere oge. 2040s na m ga - eme nke a oge niile enwere ike iji obi ọkụ na obi jụụ yabụ echere m na m nwere ike ịme 10-15 maka m ga - eme ka a hazie ya ka m wee gaa dozie ngwa m na nke m igwe kwụ otu ebe dị njikere ọfụma m chere na nke a bụ ihe kachasị ọsọ m megharịrị obere oge gafere nkeji abụọ gara aga ma oge ahụ araparala n'ime ebe m na-adọba ụgbọala, echere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji anọ mana m ga-eche na m ga-agbanyeriri onye ahụ ofufe, n'ihi na ọ dị m ka ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ka m wee gbanye ihe a, ọ dị mma, yabụ ugbu a, m bụ nkeji anọ na 30 sekọnd na m na-ekpo ọkụ, enwere m ic 20 sekọnd tupu h amalite mgbalị mbụ m chere na ọ dị mma ugbu a ọ bụ oge m na-eche Obere obere nrụgide m na-ekwu na enweghị m ọkụ kachasị mma m na-enwekarị minit 10-15 mana mana echere m na anyị ga-abanye ndị a akpa akụ m ga-ewere ha na mbido a dịtụ mfe ma anyị banye n'ime ha ka m nwee sekọnd anọ ka m wee pụọ karịa oge kachasị m amaghị ụbọchị ụbọchị n'izu ọ bụ ya mere nye m nkeji 30 ma ịmara na ọ ga-abụ oriri etisa ma ọ bụ oyi n'èzí ma achọghị m ịdị n'èzí m nọ ebe a ogologo oge ma ọ bụ na enwere m ihe jikọrọ m na ezinụlọ m maara na m ga-eme ya ngwa ngwa yabụ m na-enwekarị iji mee ka mgbochi okporo ụzọ banye na mpaghara gbanwere uwe m, anyị ga-eti ya, anyị ga-akụ aka n'ọnụ ụzọ ámá ozugbo m si n'ọnụ ụzọ pụta, ọ dịghị ihe dị ihe dị ka nkeji abụọ na atọ iji kpoo akwa ụkwụ m iji kpoo ọkụ bulie m elu, mee ya na igwe kwụ otu ebe nke ọma were were obi m were pụọ 120 ruo 140 maka nkeji ise ka ịgagharị ka m nwee ike ịkwadebe maka mgbatị ahụ m ga-eme, yabụ anyị nwere nkeji atọ iji pịa apata ụkwụ ngụ oge iji bilie. Maka nkeji ise sochirinụ Achọrọ m ịnọgide na-enwe ọmarịcha ọkwa dị elu achọghị m ịkụnye akwara, ọkachasị mgbe ịnweghị oge, ị chọghị ilekwasị anya n'ịmụta Biggear iji nweta obi obi Ọ dị elu site n'ọnụ ụzọ ámá ị chọrọ ka ijeụkwụ gị dị na cadence na-arụ ọrụ dị elu na usoro obi obi ọ bụchaghị imesi ozu ahụ dum ike nke na-abịa mgbe e mesịrị na nkeji ole na ole dabara na njem 30 nkeji ọ ga-esi ike mana echere m enwere ike ime ya na achọrọ m iji nke a dị ka ohere iji gaa ọmarịcha ịnyịnya ígwè, gbasaa ụkwụ m, zụọ m akpa ume, bụrụ otu na okike, oge udo n'etiti etiti ọrụ nwere ike ịda mba ụbọchị yeah yeah my ụbọchị na-agwụ ike, ha ka mma, gbanwee uwe gị. Jidesie ike, ịnọghị ebe a, lepụ anya maka ihe mkpuchi nke okpu nzuzo nke abụọ, adịla m njikere, apụla m, apụla m n'ọnụ ụzọ, ana m apụ n'èzí oh na-adị m mma apụ ugbu a, o were m nkeji abụọ iji kwadebe n'ihi na m bepụ ihe niile jọgburu dị-kit si n'ọnụ ụzọ na igwe kwụ otu ebe m kwere onwe m 13 nkeji oge ịkwọ ụgbọala na m ga-eme otu ụzọ n'okporo ámá m, na m mere nke a n'ihi na achọghị m ịhọrọ akaghị nwere ike ịdị ogologo karịa ka ọ nwere ike ịdị na akwụkwọ, yana n'ihi na ọ pụtara na amaara m na m ga-atụgharị ma laghachi azụ ka m wee nwee ike ịlaghachi n'oge, yabụ ọ bụrụ m na-eme 30 nkeji? na otu direction 13 nkeji azụ na nke ahụ bụ 26 nkeji ngụkọta njem oge ya mere m nwere ndị abụọ nkeji njikere iji kwadebe, ekwe ka m abụọ ọzọ nkeji ịgbanwe mgbe e mesịrị n'ihi na m nwere a dị nnọọ mkpa nzukọ mgbe ahụ, otú ahụ ka m ga-ahụ na m ' Aga m alaghachi n'oge ka onye ọ bụla nwee ike ịme njem dị oke elu na nkeji 2026 nkeji oge ịkwọ ụgbọala m gbanahụrụ ọkara elekere m gbapụrụ akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe mana achọghị m ịma m kpebiri ide abụ banyere ya dee m mmiri wet wet wet bike akpụkpọ ụkwụ na chọrọ n'ezie ka m na-abụ abụ maka bluesnow m 30 nkeji mgbatị, m ga-esi n'èzí gaa ụfọdụ ugwu na bath ebe m bi n'ihi na ha dị ezigbo nso ka Olileanya m nwere ike ime ihe ọma Nkeji 10 nke vo2 max mgbatị na windo a, gịnị ka m ga-eme? n'ihi na ọ na-ewe m 10 nkeji iji kwadebe, yabụ enwere m naanị nkeji 20 ka m rịgoro inutes, nkezi bụ 10, o siri ike, mana echere m na m nwere ike ịme nnabata abụọ dị mma ebe a, ihe dịka 380 400 watts wee bụrụ ihe dị ka nkeji 10 n'ụdị mkparịta ụka ndị a nke vo2 max endstop m nọ na turbo 19 na ọkara nkeji ugbu a, m kwụsịrị ịgụta mbọ 20 m gbalịsiri ike abụọ m mere kama amalitere m ịmụrụ anya m swearụọ iyi, obi m na-arị elu, yabụ enwere m ezigbo mgbatị ahụ echere m Enwere m ike karịa na nke ahụ ga-apụta nkeji ise ọzọ oh mba m ga-ajụkwa ee ee ise ọzọ ma nkeji abụọ nke cooldown n'ezie gbanwere ụkwụ m wee hụ ma m ga - agagharị na nkeji atọ nke ga - abụ naanị ihe niile dịkwa mma ka anyị mee obere mbọ, ọ dị m ka ọ bụrụ na m chọrọ ugbu a, mana m nọ n'okporo ụzọ maka ọfụma, dị mfe nkeji iri sen N'ezie, emechara m onwe m ebe a na nke abụọ, na-eme nzaghachi m nke abụọ na elekere na-aga. n'ihe dị ka nkeji 26 nke pụtara na enwere m nkeji anọ ịlaghachi n'ụlọ ma gbanwee nke ahụ bụ nzuzu idea oh godoh, a kara m mma ka m jiggle this much for a cool downokay so I not not on my way for asaa nkeji mana m chere na m ka kwusiri n'ihi na achoro m nkpuru osisi di nma.
Echere m na m na-abịakarị ebe a n'oge mgbụsị akwụkwọ iji kpọpụta ha ka ọ bụrụ n'oge na-adịghị anya iji mee ihe n'eziokwu na achọpụtara m ebe a ka m kwụsị ma hụ m ga-anwale ha ezigbo kemmiri ihe ntakịrị ntakịrị tart otu ntakịrị iwe ha nwere ike a hapụrụ guzo obere ogologo izu abụọ m chere na ọ dị mma ka m mara agbanyeghị m ịgbawa mma n'ihi na nke a n'ụzọ ụfọdụ na-erepịakwa obere oge dị oké ọnụ ahịa m nwere obi ụtọ inwe nke a dị ka obere njem ihu ụra n'oge ezumike nri ehihie m, ịgwa gị ugwu ahụ bụ ugwu dị elu adịghị eleda ya anya nke ọma, emere m ya n'etiti Myride na Carrick na uwe elu na ogologo na akwa n'elu osimiri ahụ ugbu a na otu ị ga - esi hụ ebe ọhụụ magburu onwe ya site na ebe a, osimiri ahụ bụ mara mma fụrụ akpụ m kwesịrị ịsị na anyị nwere nnukwu mmiri ozuzo ya mere ọ dị ka ọmarịcha ọchịchịrị Own red a ogbenye ụmụ okorobịa nwere ntakịrị nke ya ihe mberede, echela na ọ ga-enweta ụgbọ epeepe na ọkara elekere ọkara elekere oh Etufuru m ntakịrị, ọ ga-akara m mma ịlaghachi n'ihi na ọfụma, yabụ ụzọ gasị na-ekwu okwu nke ọma na ikwu eziokwu na enwere m ntakịrị ihe m bu maka ibili Downsiskin ugwu ọ na-ewe m 30 nkeji iji rute ebe a na mgbe m na-alaghachi, ọ dị elu, nke ahụ adịghị n'ime atụmatụ m, echeghị m banyere ya, enwere m echeghi nke a ma oburu na aga m eme nzuko a n'ihi na obu nzuko di nkpa30 nkeji nwetara ihe obula ka m mechara okwu a nkeji abuo gara aga na 30 sekọnd m ga - eti ihe ma m gha na-a ezumike nkeji abụọ, 30 sekọnd niile outokay, otú ahụ ihe mbụ na nke abụọ nkeji na-eme, ugbu a, m nwere nkeji abụọ free na m nwere ihu ọma dị na-aga na-ajụkwa, mgbe ahụ, m ga-eme ya ọzọ, ọzọ abụọ nkeji. Abịara m ebe a n'olulu ájá a ka m wee nwee ike ịrụ ọrụ dị mma, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma nwee ọ funụ na-atọ m ụtọ n'ihi ya enwere m obi ụtọ na m ga-eji 30 nkeji ụbọchị m dị ka ọtụtụ n'ime unu bụ akụkụ dịpụrụ adịpụ. Enweghị m nsogbu, yabụ enwere m sekọnd 60 ka m zuru ike, mgbe ahụ, m ga - eme mgbatị nkeji abụọ ọzọ, mgbe ahụ m ga - arụkwa ọrụ igwe kwụ otu ebe, nke ọma, ka anyị bido nke abụọ ebe a , Anyị nwere na nke abụọ set mere, anyị ka nwere abụọ nkeji na mgbe ahụ, m ga-eti maka ikpeazụ m set nke ndị fọrọ ụzọ Vo2 etiti oge na m na-enweghị ọtụtụ ihe na-echeta oge a chọrọ m ngwá m akpụkpọ ụkwụ m igwe kwụ otu ebe na m chefuru a weld olulu ato ozo enwere m ike itinye mgbali ma m nwere ike ịkpọ ala, m ga-ekwusi ike ka m mee ezigbo ọkụ ma kpọọ ezigbo ekwentị mgbe ọ bụla ị na - eme nnọkọ dị ka en a, mana m chere na m nwetara ya mana o doro anya na ezighi ezi m ịbịaru 27 nkeji ma achọpụtara m na nkeji nkeji abụọ mgbe nnọkọ siri ike dị otú ahụ ezughị ezu ụkwụ m ka na-enwu ọkụ, obi otiti m ka dị ọsịsọ ma ọ bụrụ na m pụọ ugbu a, ụkwụ m ga-akpọ m asị echi, yabụ m ga-anọ na turbo maka nkeji ole na ole naanị iji jụọ oyi nke ọma ka m ghara inwe ihe mgbu emesia, mana gini ka m chere, nkeji ato ka m puta saa ahu? O wee pụta na atụghị m atụmatụ nke ọma na m ga-esi ike dịka m nwere ike ịlaghachi n'ụlọ megide Hillah Power na ya mere oge ndị ahụ agwụla, ugbu a ọ bụ oge ime ihe site na ọrụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na m na-adọba igwe kwụ otu ebe ma ugbu a, m ga - ewepụta sekọnd 20 ọzọ ka m na - arụ ọrụ m ga - alaghachi ugbu a, m ga - aga n'ihu na mbọ ndị a, ugbu a, otu ọzọ, enwere m ọrịa, huhso maka ihe niile ahụ enwere m mpaghara m bi na - anaghị apụ apụ agabeghị ụlọ nke ọma enwere m mbọ ikpeazụ m ga - eme, aga m eme nke a n'akụkụ ụzọ mgbe m na - alaghachi n'ụlọ m Ọ dị mma, ugbu a 20 sekọnd ziri ezi ka m jisiri ike nwalee ya na ịrịgo na Achọrọ m ịla n'ụlọ m ugbu a, echere m na m doro anya na m nwere 25 nkeji ịkwọ ụgbọala yabụ enwere m nkeji atọ iji laa n'ụlọ, nkeji abụọ, ka agbanwee, wee bie m laghachi ọrụ na ọkara otu awa ka ọ dị ugbu a, enwere m obi ike na m ga-ahụ ya na tebụl m ka m mechara nzukọ m, enwere m ike ịmebeghị njem kacha njọ mana ị maara ihe ọ dịghị mkpa n'ihi na m pụọ m hav e ezigbo ikuku ma amachagoro m dị mma karịa ihe ọ bụla mgbe ụfọdụ na ndụ anyị anaghị eme ihe maka na anyị enweghị ike ịme ihe niile anyị ga - eme karịa ịme obere ihe ma ịmara, oge ụfọdụ ihe niile ị nwere ime bụ mfe ịpụ ebe ahụ, ịgbagọ ụkwụ gị ma nwaa ya na nke ahụ bụ ikike anwansi, yabụ ana m alaghachi wee wuo ya niile n'ime njem m ka m wee laghachi n'oche m n'ihe dị ka nkeji ma ama m enwetala m uhthree nkeji - Ndi kpoo m mere m obere ego nke dị mfe m mere m nkeji abụọ na nkeji abụọ kwụsịrị igwe kwụ otu ebe na-agba ọsọ na sprints ugbu a, m ga-eme a ole na ole Ka a ngwa ngwa Sprint na-akwụsị nke ikpeazụ a, ya mere nke ahụ bụ ya 3 0 nkeji m dị ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịwụpụ ebe ahụ mee ka ọ dị gị mma ị ga-enweta ọbara na-agba na ụbụrụ gị ị ga-enwe mmetụta dị oke mma ị ga-enwe ọfụma na ị nwere ihe dị ntakịrị karịa karịrị ihe ọ bụla bụ ihe ọ bụla ihe ikwu nwere fun jide n'aka na-ekele gị maka na-achọ na niile. Enwere m olile anya na ị nwere mmasị na nke a ma enwere m olileanya na ọ kpaliri mmụọ gị ịbanye na igwe kwụ otu ebe ma nwee ọ enjoyụ obere ụgbọ ala ndị a, mana biko mee ka anyị mara na ihe ndị a n'okpuru ma ọ bụ mgbatị kachasị amasị ma ọ bụ obere njem mba dị ka m ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị dị ka anyị niile na-eme na biko ka anyị mara na ihe ngalaba n'okpuru, ugbu a, m na-achọ ịnụ gị n'ike mmụọ nsọ, m ka mma laghachi m nzukọ n'ihi na m dị nnọọ jụrụ ya, lee gị anya n'oge na-adịghị, ekele maka na-achọ onye ọ bụla ma na-enwe ịnya
Ndị toro eto n’agbata afọ iri na asatọ na iri isii na anọ kwesiri imega ahụ ike ruo awa abụọ na ọkara n’izu ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị bụịgba ígwè, mgbe ahụ, ị ​​ga-eme ya ma ọ dịkarịa ala minit 30 ruo 45kwa ụbọchịmaka oge dị mkpirikpi ma ọ bụ ugboro abụọ ruo ugboro atọ kwa izu maka ogologo oge elekere ma ọ bụ karịa.
N'ihi ya, ọ bụ a n'ezie keakamere ọnọdụ na-agba ịnyịnya a igwe kwụ otu ebe na mgbe 30 nkeji m wee pụta na m ghọtara mara mma ngwa ngwa na m nwere enweghị mmetụta na m amụ, nke na-n'ezie na-aga, n'ihi na ọ dabara nke ọma na ị maara na ihe mmetụta laghachiri. Na ngwụsị nke ụbọchị, echere m na ọ dịghị ihe mere na ogologo oge, mana gịnị na - eme n'oge na - adịghị anya? N'ụzọ bụ isi n'ihi nrụgide ị na-etinye ozugbo na perineum, ị na-agbanye akwara ma ị na-agbanye ụfọdụ arịa ọbara na nke ahụ bụ ihe na-akpata ụfụ. Mgbe oge ụfọdụ nọdụrụ ala na akwara ọ ga-ewe obere mmebi nke na-abụghị mmebi ogologo oge, ọ na-ebute isi ike na mpaghara ọ na-eje ozi, nke bụ ihe mere gị.
Mgbe ahụ, isiokwu na-esote ga-abụ nrụrụ erectile ma dabere na ihe anyị nụrụ banyere nro, enwere njikọ mgbe ahụ n'etiti ịgba ígwè, ọnụọgụ ugboro ugboro na-eduga na nrụrụ erectile? - azịza ya bụ mba. Ihe ka mkpa bụ mkpa ọ dị nrụrụ erectile na mbu. Usoro ndị na - eduga na nsogbu erectile bụ otu ihe ahụ na usoro nke na - ebute ọrịa obi, nke na - eduga na nkụchi obi.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè ugbu a ma bụrụ afọ ole na-eto eto na-adịghị arụ ọrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ sadulu m' naanị n'ihi ịgba ígwè. 'Okwesiri ibu, Agaghị m lie isi m na ájá Nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi ihe na-emebeghị nchọpụta.
ọzụzụ ịgba ọsọ ịgba ọsọ
Otu ihe anyị ji enye ihe ngosi nke ihe egwu nke ọrịa prostate bụ ịnwale ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ na-arụ ọrụ. ebuli ọbara ule a prostate kpọmkwem antigen ọbara ule na-erute n'ókè ị mere nke ahụ ọbara ule ọ na-artificially elu na mgbe ahụ ị nwere a dum ụyọkọ nke ule na ị dịghị mkpa n'ihi na ị na-biking na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - enwere ohere ọ nwere ike emetụta ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara nrịba ama dị maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa cancer prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma is nweta Ọ dị mma, ọ na-eme ka ahụike gị na-arịa ọrịa obi ihe niile na-ebelata ihe ize ndụ gị nke kansa yana ọ dịghị emetụ ule na-adịghị mma maka ọrịa cancer na mgbe ahụ ọ na-aga n'ihu. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, etinyela isi na ájá ma duzie na nyocha nke ihe nsogbu bụ, ọ bụrụ na enwere ọkọlọtọ ọ bụla na-acha uhie uhie iji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Ya mere, ọ nweghị njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ọrịa prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị na-agba ịnyịnya Nsogbu naanị n'ihi na ha Ha bụ ụmụ nwoke, ndị okenye emeela ka ha chee echiche banyere ya. Amaghị m gbasara gị mana ihe m ga-eji na mkparịta ụka a mụ na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu. Anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke aka anyị ma chọọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị enwetaghị akpụkpọ ahụ nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu anyị ga-eche ihu.
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụba ọnwụma kwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Abụọ 2, 2021
Enwere m ike ịwụfu abụba site na ịgba ígwè?
Ndi igwe n’eme ka oku gbaa oku? Eeh. Ọ bụ ezie na gịafọakwara anaghị arụ ọrụ dị ka quads gị ma ọ bụ mpịakọta gị mgbe ị na-agba ịnyịnya, manaịnyịnya ígwè siaerobic ọdịdị pụtara na ị na-ere ọkụabụba.Ọnwa Mbụ 2, 2020
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida afọabụba, ma ọgawere oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ime ka abụba zuru oke ma kwalite ahụike dị mma. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọabụba.Abụọ 2, 2021
Mgbe opekempenọmbankeanyịnya igweonye kwesiri inwe bu nke ato, nke ziri ezinọmbabụ n +1. 1, ebee ka nnọmbankeanyịnya igwenwere ugbu a. Enwere ike degharịa akụkụ a s -1. 1, ebe s bunọmbankeanyịnya igwenwere nke ga - ebute nkewa site na onye òtù ọlụlụ gị.Ọnwa Ise 25, 2018
Cycgba ígwè ọ dị mma maka ihe karịrị 50s?
Ndị agadiiri iseafọ nan'elunwere ọtụtụ ihe ị ga-erite uru naịgba ígwè. Mmetụta dị ala na-eme ka aerobic dị kaịgba ígwèzuru oke makagafee-Iri isendị na-enweghị ike ịmalite ịmalite ime ihe ike; ikekwe n'ihi na ikpere ha adịghị kaezidika ha nabu.Ọnwa Ise 8, 2018
Ebee ka m nwere ike ịga njem igwe kwụ otu ebe?
Njegharị Egwuregwu azụ na-agagharị na njem 1 Baltic Sea Ocean Cruise Bike Tour 2 Berlin na njem Prague nke Prague 3 Bordeaux & amp; Dordogne Bike Tour 4 Brittany & nkwupụta ụda; Normandy Bike Tour 5 Burgundy Bike Tour 6 Canadian Rockies Bike Tour 7 Champagne & nkwupụta ụda; Alsace Bike Tour 8 Classic Provence Bike Tour 9 Croatia & nkwupụta ụda; Slovenia Bike Tour 10 Croatia Bike Tour Ihe ndị ọzọ
Ogologo oge ole bụ njem igwe kwụ otu ebe na Europe?
Chọta njem igwe na-agagharị na Europe. Enwere njegharị 688 ịhọrọ site na, nke ahụ n'ogologo site na ụbọchị 3 ruo ụbọchị 31. Ọnwa kachasị ewu ewu maka njegharị ndị a bụ Septemba, nke nwere ọpụpụ njem kachasị. 'Ọ bụ ezie na akwụkwọ nlegharị ahụ kwuru na njedebe afọ ruru afọ 99, mana njem a bụ n'ụzọ anụ ahụ' Akwụkwọ nwere mgbanwe.
Kedu ndị bụ ndị isi nke njegharị igwe kwụ otu ebe?
Ndị njem anyị na-eduzi anyị bụ ndị ndị ndu ndị njem njem ndị ọkachamara maara nke ọma ụzọ gasị kachasị mma-nke dị anya site na igwe mmadụ ma mikpuo na ịma mma nke mpaghara ị bịara ịchọpụta.